The na-amasị rose gold agba na MacBook? | Esi m mac
The na-amasị rose gold agba na MacBook?
Nyaahụ ọhụrụ 12-anụ ọhịa bilie gold MacBook rutere na mberede na ụlọ ahịa Apple n'ịntanetị. Na mgbakwunye na agba ọhụrụ, o doro anya na Apple emeela mgbanwe na-adọrọ mmasị n'ime ọnụahịa igwe a ma ọ bụ ihe na-adabere na ikpe ndị a nke mmelite ma ọ bụ melite. Ma aesthetics na Apple bụ ihe dị oke mkpa ma ndị ọrụ ma ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya. na nke a bụ ihe ndị ọrụ niile nke ngwaahịa ha maara nke ọma.
N'oge a mkpa na ìhè 12 ″ MacBook agbakwụnye a ọhụrụ agba na ọ bụrụ na ha gwara m a afọ ole na ole gara aga na ọ ga-abụ ihe ịga nke ọma na okwu nke smartphones na ndị ọzọ na Apple ngwaọrụ, Amaghị m ma ọ bụrụ na m ga-kweere na ya. Nke bụ eziokwu bụ na agba ọla edo dị na tebụl ma anyị chọrọ ịjụ gị ozugbo na nyocha a: The na-amasị rose gold agba na MacBook?
Naanị obere oge gara aga, echere m na agba ọla edo na kọmputa Apple bụ ihe na-agaghị adaba na m zuru oke. N'ezie gold MacBook bụ otu n'ime ihe ịga nke ọma n'etiti ndị ọrụ na-esote ndị na-enye ohere, ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na agba ọhụrụ a bụkwa otu n'ime ndị na-ere ahịa kacha mma. Ma na nke a, ekwuola m na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na agba ọla edo anaghị amasị m ma ọlị, na Mac m na-ahụ ya dị ka pink. N'ezie ebe a ihe dị mkpa bụ ihe ị na-ekwu wee gaa n'ihu na ya:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » The na-amasị rose gold agba na MacBook?
Apple Pay na-agbakwunye ụlọ akụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ kredit 50 dakọtara na Apple Pay
12-inch MacBook ebufere site na njedebe nke ọnwa